एमाले स्थायी कमिटी बैठक सुरु, को – को छन् सहभागी ? – Khabarkhoj
एमाले स्थायी कमिटी बैठक सुरु, को – को छन् सहभागी ?
खबरखाेज समाचारदाता	। २०७८ भाद्र ८, मंगलवार १५:४४
काठमाडौं – नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक सुरु भएको छ । स्थायी कमिटी बैठक तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान च्यासलमा सुरु भएको हो।
१० बुँदे सहमति कार्यन्वयनको बारेमा मोडालिटी बनाउन समय नपुगेको तथा अन्य गृहकार्य बाँकी रहेको भन्दै ११ बजे बोलाइएको बैठक ३ बजेका लागि सरेको थियो ।
बैठकमा उपाध्यक्ष भीम रावल, युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्य, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट र भीम आचार्य, स्थायी कमिटी सदस्यद्वय सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त र र आमन्त्रित सदस्य एवं अनुशासन आयोगका प्रमुख अमृतकुमार बोहरा पनि सहभागी भएका छन् ।
बैठकमा झण्डै ६ महिनापछि ९ जना स्थायी कमिटी सदस्यहरुले सहभागिता जनाएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको २३ फागुन २०७७ को फैसलाबाट पुनर्स्थापित एमाले एकजुट हुन सकेको छैन । २८ फागुनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पक्षको मात्र बैठक राखेर एकलौटी निर्णय गरेपछि माधवकुमार नेपाल समूहले समानान्तर गतिविधि गर्दै आएको थियो ।
नेता नेपालले २ भदौमा एमाले विभाजन गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । तर लामो समय उनीसँग रहेका स्थायी कमिटीका अधिकांश नेता नयाँ पार्टीमा गएनन् । स्थायी कमिटीका ९ जनाले केन्द्रीय सदस्यहरुसँग छलफल गरेर १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन र नयाँ पार्टी दर्ताको प्रक्रिया रोक्न माग गरेका थिए ।
सोमबार भएको छलफलमा अध्यक्ष ओली १० बँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सहमत भएका छन् । त्यसअनुसार एमाले स्थायी कमिटीको बैठक जारी रहेको छ । अन्नपूर्ण टाइम्स अनलाइनमा छापिएकाे छ ।
एमाले पार्टी प्रवक्तामा याेगेश भट्टराई
२०७८ भाद्र ८, मंगलवार १५:४४
काठमाडौ भदाै ९।एमाले प्रवक्ताको जिम्मेवारी योगेश भट्टराईले सम्हालेका छन् । उनले आजदेखि औपचारिक रूपमा प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । मंगलबार बसेको एमाले स्थायी समिति बैठकले पार्टीका संरचना २ जेठ ०७५ कै अवस्थामा ब्यूँताउने सहमति गरेसँगै बुधबारदेखि भट्टराई प्रवक्ताकै जिम्मेवारीमा फर्किएका हुन् । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता हुनुअघिसम्म भट्टराई […]
२०७७ फाल्गुन २, आईतवार १२:४९
निर्वाचन आचारसंहिता मस्यौदा तयार,तोकिएकै मितिमा चुनाव हुने
२०७७ आश्विन ३, शनिबार ०९:४८
आज संविधान दिवस, प्रधानमन्त्रीले विशेष सम्बोधन गर्नुहुदै
२०७८ असार ९, बुधबार १२:५१
रोल्पामा पहिरोले घर भत्किँदा एकै परिवारका तीन जनाको मृत्यु
२०७८ श्रावण ३१, आईतवार १६:३५
काबुलमा तालिबान छिरे, राष्ट्रपति घानीले बोलाए आपतकालीन बैठक
२०७७ आश्विन ९, शुक्रबार १२:४५
२०७७ पुष २०, सोमबार १९:५०
राष्ट्रिय लाेकतथा दाेहाेरि प्रतिस्थानकाे अध्यक्षमा सिम्खाडा
कालिकाेट दशलाका २४ घर पहिराेकाे उच्च जाेखिममा
समाजसेवी बाेगटीद्वारा काँग्रेस उपसभापतिकाे उम्मेद्वारी घाेषणा
भारत र अमेरिका अनुकुल वर्तमान सरकारले जनअपेक्षा पूरा गर्दैन – सेक्रेटरी रणदिप
जनपत्रकार संगठन कालिकाेटकाे सम्मेलन उदघाटन
एमाले कालिकाेटकाे वैठक सुरु
बालविवाह न्यूनिकरणका लागि निबन्ध प्रतियाेगिता रास्काेटमा
लैंगिक समानता सम्वन्धि वक्तित्वकला सम्पन्न
कालिकोट जिप दुर्घटनामा एकजनाको मृत्यु,११ घाइते
वाइसिएल केन्द्रिय अध्यक्षमा कालिकाेटकी पूर्णीमा